2007-05-29 @ 08:14 in Finoana
Efa rere tao ho ao ny momba ity teny hoe androm-bavaka manerantany ity(Global Day of prayer). Lazaina ombieny ombieny fa niainga tany Capetown ity fihetsiketsehana ity. Izany moa no lazainy ao amin’ny transformation africa ao. Raha ny marina anefa araka ny testamenta kristiana dia tany amin’ny andron’ny Apostoly mihitsy no efa nisy izany vavaka isan’andro nialoha ny tamin’ny alahady iny.
Folo andro no niomanan’ireo mpikarakara tany amin’ny toerana samihafa (ary anisan’izany ny fiangonana loterana malagasy ao Ambatovinaky) teto an-tanàna. Nisy ny fotoam-bavaka maraina (tena maraina tokoa satria mbola mazavaratsy mihitsy) ary nisy ihany koa ny fotoana hariva samy adiny roa avy. Folo andro no nanatanterahana ny fikarakarana isam-paritra. Ny lohahevitra nobanjinina nandritra izany fotoana izany dia ny ao amin’ny 2 tantara 7 andininy faha-14 ao izay manomboka amin’ny teny hoe raha ny olona izay antsoina amin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka…
Rehefa amin’ny filazana fa fiangonana maro no miara-misalahy amin’ity raharaha ity dia tsy miditra loatra ny fiangonana katolika. Ny somary mahagaga ahy aza noheveriko fa ny fiangonana pentekotista no tena lohalaharana amin’ity fihetsiketsehana ity. Mifanandrify amin’ny anarana pentekosta ihany manko ny anaram-piangonana. Ny teto Madagasikara anefa dia ny sasatsasany tamin’ireo lohandohan’ny fiangonana loterana ny fjkm (ary mavitrika ao amin’ny ffkm eto Antananarivo ihany koa) no tena nafana fo tamin’ny fikarakarana azy sy tamin’ny fanentanana ny mpiangona tao aminy. Azo heverina avy hatrany fa noho ny fifandraisana eo amin’ireo lohandohan’ny mpisorona sy ny mpitarika eo anivon’ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly sy ny fikambanana mampiely baiboly Malagasy no singa iray niteraka izany. Ireo fikambanana roa ireo tokoa manko no mpikarakara voalohany ity hetsika ity eto Madagasikara.
Ireo fikambanana roa ireo ihany koa no tetezana ifandraisan’ny fiangonana ara-tantara sy ny fikambanam-pivavahana kristiana vaovao tsy manava-tena. Efa nanana fahazarana amin’ny fanaon’ny mpiara-mamaky ny baiboly ihany aho ka fantatro fahatsoran’ny fomba araka izay azo atao. Mora ho an’ireo fikambanana roa tsy hain’ny maro avahana ireo ny manatona ny andaniny sy ny ankilany avy.
Ny andron’ny pentekosta tolakandro ary dia tao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina no nanatanterahana ilay androm-bavaka maneratany anjaran’Antananarivo. Toerana tsy antonona intsony ny habetsaky ny olona tonga tao saingy tsy nahazo ny toerana lehibebe kokoa manko. Nefa toerana sahala amin’ireny ihany no eken’ny rehetra fa tsy fiangonana lehibe izay manavahiny izay tsy mpiangona ao. Amin’izany maha androm-bavaka maneratany azy izany dia tena ny vavaka tokoa no nibahan-toerana.
Tsy ny toriteny na ny filazan-draharaha no betsaka, ary tsy ny hira ihany koa aza fa dia ny fanandratana an’Andriamanitra sy ny fiantorahana taminy tamin’ny endrim-pivavahana rehetra. Koa taorian’ny toriteny fohifohy nalaina avy tao amin’ny Romana 14 :1 – 14 izay manambara amin’ny ankapobeny ny tsy tokony hifampihafahafana na dia samihafa fomba aza ary tsy ifampitsaratsarana foana dia nanomboka ny endrim-bavaka mety ho fantatra rehetra.
Voalohany tamin’izany ny vavaka ifamaliana izay heveriko fa mitovy avokoa amin’ireo firenena mahatratra 200 lazaina ho miara-manatontosa ity Global Day of Prayer ity fa ny teny no natao tamin’ny teny malagasy. Ny vavaka ifamaliana moa dia vavaka tononon’ny mpitarika sy valian’ny mpanatrika rehetra. Ny any amin’ny Katolika sy ny loterana ary ny anglikana no tena mahazo azy ity fa raha any amin’ny hafa dia mitovitovy karazana amin’ny famakiana ny salamo ifandimbiasan’ny mpitarika sy ny vahoaka ihany izany. Azoko lazaina fa tsy tsara dika ilay vavaka na tsy tafiditra loatra ilay fanandratana amin’ny mahagasy fa azo tsara ny tian-kambara ao anatiny. Nifandimby nitarika moa teto ny ankamaroan’ireo mpitari-pivavahana nanana solontena tonga tao.
Efa izay dia lasa indray ny vavaka ho an’ireo sokajin-taona rehetra ka samy nomena ny anjarany ny ankizy, ny tanora ny vehivavy ary ny lehilahy. Samy manana ny solontenany ireo sokajintaona ireo. Amin’ny ankapobeny moa rehefa tahaka ireny dia vavaka fifonana hatrany no manjaka. Ireo solontena moa dia misy ireo nanao vavaka novakiana ary misy kosa ny nivavaka tora-po. Asa fa noho ny mpanentana saiky lehilahy avokoa angaha ka mba naka toerana lavalava ny mpitarika nanana anjara ho an’ny vehivavy (Pst Rebeka izay ananana rohim-pihavanana ihany), nanao fanazavana aloha ny anao alohan’ny anaovana ny vavaka ary indroa miantoana ny nanaovany ny vavaka.
Ary nenti-namaranana azy dia samy nivavaka avokoa ny rehetra nanatrika ka nanao faribolana kely nifamory isaky ny olona telo ka hatramin’ny olona enina teo ho eo. Efa nisy rahateo ny antom-bavaka napetraka dia ny hampazoto ny malagasy hivavaka sy hitodika amin’Andriamanitra, ny vavaka hanalana ny herin’i Satana tsy hanjaka amin’ny fon’ny olona ary ny mba handrosoan’i Madagasikara ara-toe-karena. Io lohahevitra farany io dia be ihany no tsy nankasitraka azy. Nibahana tao an-tsain’ny maro angaha ny teny hoe ny fivavahana tsy natao ho filan-karena ka tsy nisy loatra ny nivavaka ho amin’izany, ny ananan’ny malagasy fiadanana sy fahasambarana tsy voatery ho amin’ny alalan’ny vola no nihoraran’ny olona kokoa. Tsapa manko izany firoanan’ny nanatrika izany rehefa nomena ny fitenenana ny solombavam-bahoaka tonga teo niteny hoe tsy ilaina loatra fandrosoana tsy misy fanahy sy anjakan’ny faharatsiana ka nitehaka avokoa izy ireo (talohan’izay anefa dia tsy nisy tehaka loatra).
Fehiny, tena ireo olona vontom-pinoana tokoa no nanatrika tao raha vavaka no nanjaka nefa dia roa ora sy sasany no nanaovana azy. Tsy nisy vidim-pidirana tahaka ny hitako tany amin’ny firenena sasany ny teto Madagasikara sady tsy hanisy vidim-pidirana mihitsy. Lesoka ihany koa ny nanadinoana mba hisian’ny solontenan’ny vahiny tsy mahazo loatra ny teny malagasy izay maromaro ihany ny nanatrika tao hanana anajara vavaka ihany koa. Eny fa na teny anglisy aza no nanaovany izany inona moa no tokony ho olana ? Nisy Japoney tonga koa anie tao e ! Amin'ny 11 mey 2008 indray izany ny androm-bavaka manerantany manaraka.